बिहे गर्दैछन् बलिउड अभिनेता,अभिनेत्री विक्की कौशल र कट्रिना कैफ? - Malayakhabar
होम पेज फिचर बिहे गर्दैछन् बलिउड अभिनेता,अभिनेत्री विक्की कौशल र कट्रिना कैफ?
एजेन्सी:= बलिउड उद्योगमा अभिनेता विक्की कौशल र कट्रिना कैफको विवाहको खबरले निरन्तरता पाइरहेको छ । तर, केही दिनअघि दुवैले १८ अगस्टमा इन्गेजमेन्ट गरेको हल्ला चलेको थियो ।
अब दुबै आफ्नो सम्बन्धलाई अर्को तहमा लैजान तयार रहेको र छिट्टै विवाह बन्धनमा बाँधिने स्रोतले जानकारी दिएको छ। उसो त, कट्रिना र विक्की अगष्ट महिनामै बिहे गरेको खबर समेत सार्वजनिक भएको थियो । विक्कीले भने बिहेको समय आएपछि मिडियालाई यो बिषयको जानकारी दिने बताउँदै आएका छन् ।
सब्यसाचीले विक्की र कट्रिनाको कपडा डिजाइन गर्दैछन्
टाइम्स अफ इन्डियाको रिपोर्ट अनुसार विक्की र कट्रिनाले विवाहको तयारी सुरु गरिसकेका छन् । स्रोतले भन्यो, ‘दुवैको विवाहको पोशाक सब्यसाचीले डिजाइन गरेका हुन्। उनीहरूले अहिले पोशाकको कपडा छनोट गरिरहेका छन्। कट्रिनाले आफ्नो पोशाकको लागि कच्चा सिल्क नम्बर छनोट गरेकी छिन्, जुन लेहेंगा हुनेछ। विवाह नोभेम्बर वा डिसेम्बरमा हुनेछ।’
विक्की प्रायः कट्रिनाको घरमा देखिन्छन्
जबदेखि विक्की र कट्रिनाको सम्बन्धको हल्ला चल्छ, दुवै यसबारे मौन छन् । यद्यपी, यी दुई प्रायः सँगै देखिएका छन् र विक्कीलाई कट्रिनाको घरमा धेरै पटक देखिएको छ। हालै दुवै फिल्म ‘सरदार उधम’ को स्क्रिनिङमा देखिएका थिए । यस क्रममा विक्की र कट्रिनाको अंगालो हालेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल भएको थियो ।
सन्नीले रोकाको रुमर्सको खबर पनि सुनाएकी थिइन्
यसअघि विक्कीका भाइ सन्नी कौशललाई रोका रुमर्सको बारेमा सोध्दा उनले भनेका थिए, ‘विक्की त्यो बिहान जिम गएका थिए र त्यही बेला अफवाह आउन थाल्यो, जब उनी जिमबाट फर्किए, उनका आमाबुवाले ठट्टा गर्दै भनेका थिए,’ हे यार, तिम्रो इन्गेजमेन्ट भयो, मिठाई खुवाउनु छ।’ जसको जवाफमा विक्कीले भने, ‘जति वास्तविक मिठाई छ, त्यति नै खानुहोस्’ । वर्कफ्रन्टको कुरा गर्दा कट्रिना कैफ ‘सूर्यवंशी’, ‘फोन भूत’ र ‘जी ले जरा’ जस्ता फिल्ममा देखिनेछिन् । योसँगै विक्की कौशल फिल्म ‘द अमर अश्वत्थामा’मा देखिनेछन् ।
अघिल्लो लेख यी शिक्षक जसले पोर्न वेबसाइटमा अनलाइन कक्षा होस्ट गर्छन्।
पछिल्लो लेख मुख्यमन्त्री शाक्यले दिइन् राजिनामा, अर्को सूचना नआए सम्म बैठक स्थगित।